Fiadidiana ny repoblika :: Natosiky ny finiavana hanompo tanindrazana ny tale vaovaon’ny Serasera • AoRaha
Fiadidiana ny repoblika Natosiky ny finiavana hanompo tanindrazana ny tale vaovaon’ny Serasera
Fanamarihana. « Tsy mbola voafatotry ny loko politika aho », hoy Rajoelisoa Soatiana, talen’ny Serasera sy ny fifandraisana vaovao eo anivon’ny Fiadidiana ny Repoblika raha nitafa fohy tamin’ny mpanao gazety, teny Ambohitsorohitra, omaly.
Nisy ny fiaraha-miasany tamin’ireo mpitondra nifandimby nanomboka tamin’ny taona 2003 saingy tsy nandrisika azy hiditra lalina ao anatina fikambanana politika izany, hatramin’izao. Isaorany manokana ny safidin’ny Filohan’ny Repoblika tamin’ny fanendrena azy izay nilazany ihany koa ny fandraisany an’izao andraikitra vaovao izao « noho ny finiavany hanompo ny tanindrazana ».
Nampahafantariny ny fisokafany amin’ny rehetra. Marihina fa nivoaka tao amin’ny sampam-pampianarana Lalàna, teny amin’ny Oniversiten’Antananarivo Rajoelisoa Soatiana ary nandia fianarana maro tany ivelany. Nandalo tao amin’ny sekolin’ny mpiasam-panjakana tany Paris (Frantsa) rehefa isan’ireo roa nahomby tamin’ny fifaninanana natao tamin’ny taona 2015. Nianarany manokana ny diplaomasia sy ny fifandraisana iraisam-pirenena.